ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြိုက်သလောက် မိုက်လို့ရတယ် ဘယ်တော့မှ မယုတ်မာပါနဲ့ – Shwe Pann Thee
Shwe Pann Thee Knowledge ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြိုက်သလောက် မိုက်လို့ရတယ် ဘယ်တော့မှ မယုတ်မာပါနဲ့
ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြိုက်သလောက် မိုက်လို့ရတယ် ဘယ်တော့မှ မယုတ်မာပါနဲ့
ယောက်ျားဆိုတာ မယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ..
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တင်၊ ရင် တွေကြည့်ပြီး အပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေ မင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား? ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျားသဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့။ အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့ အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီလဲ.. ကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား။ အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းက ကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာ သိထားပါ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်း စာနာတတ်တဲ့စိတ် မရှိရင် ခွေးထက်ယုတ်ညံသွားလိမ့်မယ်။
Tattoo ထိုးမှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား.. ဆေးလိပ်/အရက်သောက်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား.. ဗလတောင့်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား.. နောက်ဆုံး စစ်တပ်ထဲဝင်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား.. တကယ်တမ်းတော့ ယောက်ျားပီသဖို့ သူများသားသမီးကို မယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ။
မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ အတွက် မင်းခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တည်းခိုးခန်းအစား မင်္ဂလာခန်းမထဲ ပြောင်းခေါ်ခဲ့လိုက်ပါ။ မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းဆိုရင် အချစ်တစ်ခုကို ဘန်းပြပြီး သူအဝတ်အစားတွေ ချွတ်နေတဲ့ မင်းလက်ကို ရပ်လိုက်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်နဲ့ဘဝကို စော်ကားဖို့ ကြိုးစားတော့မည် ဆိုရင် အရင်ဆုံး ကိုယ်အမေ အစ်မနှမကို ပြေးမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။
ယောက်ျားတစ်ယောက် ကြိုက်သလောက် မိုက်လို့ရတယ် ဘယ်တော့မှ မယုတ်မာပါနဲ့။
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ႀကိဳက္သေလာက္ မိုက္လို႔ရတယ္ ဘယ္ေတာ့မွ မယုတ္မာပါနဲ႔
ေယာက္်ားဆိုတာ မယုတ္မာဖို႔ပဲ လိုတာပါ..
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တင္၊ ရင္ ေတြၾကည့္ၿပီး အပ်ိဳစစ္လား မစစ္လား ေဝဖန္ေနတဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေကာင္ေတြ မင္းတို႔ေရာ လူပ်ိဳစစ္ရဲ႕လား? ရမလား စမ္းတာ ေယာက္်ားသဘာဝလို႔ မေျပာပါနဲ႔။ အဲ့ဒီစကားတစ္ခြန္းေၾကာင့္ မိန္းကေလးေပါင္းမ်ားစြာရဲ႕ အရွက္သိကၡာ နစ္နာမႈေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားၿပီလဲ.. ကိုယ္ခ်င္းစာမိရဲ႕လား။ အိုင္ေတြ႕လို႔ ေျခေဆးမယ္ ဆိုကတည္းက ကိုယ္ေျခေထာက္က နဂိုကတည္းက မသန႔္လို႔ပဲ ဆိုတာ သိထားပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ႏွမခ်င္း စာနာတတ္တဲ့စိတ္ မရွိရင္ ေခြးထက္ယုတ္ညံသြားလိမ့္မယ္။
Tattoo ထိုးမွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား.. ေဆးလိပ္/အရက္ေသာက္မွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား.. ဗလေတာင့္မွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား.. ေနာက္ဆုံး စစ္တပ္ထဲဝင္မွ ေယာက္်ားပီသတယ္ ထင္ေနလား.. တကယ္တမ္းေတာ့ ေယာက္်ားပီသဖို႔ သူမ်ားသားသမီးကို မယုတ္မာဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ မင္းသာ ေယာက္်ားေကာင္းဆိုရင္ ကိုယ္ခ်စ္တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကို ဘဝတစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ မင္းေခၚသြားဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ တည္းခိုးခန္းအစား မဂၤလာခန္းမထဲ ေျပာင္းေခၚခဲ့လိုက္ပါ။ မင္းသာ ေယာက္်ားေကာင္းဆိုရင္ အခ်စ္တစ္ခုကို ဘန္းျပၿပီး သူအဝတ္အစားေတြ ခြၽတ္ေနတဲ့ မင္းလက္ကို ရပ္လိုက္ပါ။ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္နဲ႔ဘဝကို ေစာ္ကားဖို႔ ႀကိဳးစားေတာ့မည္ ဆိုရင္ အရင္ဆုံး ကိုယ္အေမ အစ္မႏွမကို ေျပးျမင္ၾကည့္လိုက္ပါ။
ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ ႀကိဳက္သေလာက္ မိုက္လို႔ရတယ္ ဘယ္ေတာ့မွ မယုတ္မာပါနဲ႔။
စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်ဖို့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတိုင်း ဖတ်ဖို့
” စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေး ဖတ်ဖို့ ” စိတ်ထားကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးတွေကအများသောအားဖြင့် အချစ်ကံ ခေကျတာများပါတယ် ။ သင်က စိတ်ထားကောင်းတော့သင် ချစ်တဲ့ သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကကျတော့သင့်အပေါ် ဘာလို့ မကောင်းရတာလဲ ...
လမ်းဘေးမှာ ဆင်းရဲတဲ့အဖိုးအို နဲ့ အင်္ကျီချွတ်နေတဲ့လူငယ်လေးကိုတွေ့လို့ သေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…လမ်းဘေးမှာ ဆင်းရဲတဲ့အဖိုးအို နဲ့ အင်္ကျီချွတ်နေတဲ့လူငယ်လေးကိုတွေ့လို့ သေချာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
မိဘ ဆရာတွေရဲ့မှန်ကန်တဲ့သွန်သင်လမ်းပြမှုအောက် ကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးဆိုတာ သက်သေပြနေပါတယ် ၂၂၊ ၁၊ ၂၀၂၂မနက်က ညောင်ဦးကိုကားပြင်ဖို့သွားရင်း ဆီဆိုင်မှာ ဆီထည့်ပြီး ဆီဆိုင်ရှေ့ကအမြဲလှူနေကြဒကာကြီးကိုလှူဖို့လုပ်နေတုန်း ထင်မှတ်မထားတဲ့မြင်ကွင်းလေးကမျက်စိရှေ့ရောက်လာလို့ ကြည်နူးစိတ်နဲ့ ရိုက်ထားမိတယ်။ ကြည့်ရတာလူငယ်လူလတ်လေးထင်တယ် ။ အဘကြီးနားမှာဆိုင်ကယ်လေးရပ်ပြီးကိုယ်တွေကားထဲမှာ သင်္ကန်းခေါင်းမြီးခြုံထားတာ အေးလို့ ။ ...